Kungani i-botilony? Kuyasebenza (ikakhulukazi ngesimo sethu sezulu), elula futhi enhle. Sifunda izitayela ezintsha-2018 futhi silungiselela ukuvumelanisa.
Izindwangu ezinamahlumela ezinyawo: izibonelo zesitayela somgwaqo
Izinkinobho zama-ankle ezinamafashini-2018
Ngaphambi kokuthenga umbhangqwana ohlosiwe, qaphela ama-nuances wangempela: kufushane, noma, ngokuphambene nalokho - i-boot-capped boot, i-nose-capped ekhaleni, isikwele esikhulu, i-trapezoidal, isithende esingenxantathu. Imibala ekhethekile ye-chic - imibala ekhanyayo (izinyoka noma i-ingwe yokuphrinta, i-suede, i-scarlet, igolide noma isiliva metallic), ukusika okujulile, izithende ezinama-curly. Emibhangqwaneni enjalo, abalingisi bezinhlelo zokubhala babikezela ukuthandwa phakathi nezinkathi ezimbalwa ezizayo - uma ujabulela, hamba ngesibindi ekuthengeni.
Amabhuzu amahle kunazo zonke zonyaka: ezimibalabala futhi ezimangalisayo
Izikhumba ze-Ankle nama-jeans / amabhulukwe
Uma ukhetha i-cache ekhululekile, hlanganisa amabhuzu ezinyawo ngebhola elifushane kanye ne-jeans eqondile - ngokungazinaki noma ukusika. Abaqambi bacacise: izicathulo eziphumelelayo kufanele zibonakale ngokugcwele! Isiqephu: amabhulukwe amancane-amahloni, ama-leggings kanye neggings. Engeza ijazi elivuthayo noma ijezi eliphansi, ubophe isikhala - le ngubo yendawo yonke izokuvumela ukhululeke ebusika nasekuseni kwentwasahlobo.
Izithombe ezingavamile ngezinyawo zezinyawo
Izikhumba ze-Ankle kanye neziketi
Isixazululo esihle kulabo abakhetha izithombe zowesifazane: izikhumba ze-ankle kanye nesigqoko se-midi esingaphansi (seboya, i-tweed noma i-jersey eqinile). Isethi esinjalo siyokuvumela ukuba ugcizelele ukuphakama kwamathole namazinyo. Ingabe ukhetha mini? Ayikho inkinga: khetha i-trapeze ye-flirty noma iphethini lokusika eliqondile.
Izithombe ezinhle zebusika-entwasahlobo 2018
Izicathulo zezingane ezinyathelweni zokuqala
Indlela yokukhetha izicathulo zasebusika
Ungakhetha kanjani izicathulo ezikhululekile?
Izicathulo zemi Fashion kule nkathi
Ubukhulu bamandla ezinyawo kwabesifazane
Yini okufanele ugqoke izingodo?
I-Cappacci ene-Snickers ne-caramel icing
Ukuhlukaniswa ngoKhisimusi emabhothini kuyindlela efanele yokwazi ikusasa lakho
UDuracell - umlingani osemthethweni we-movie ethi "Star Wars: Ukuvusa amandla"
Ungathanda kanjani futhi uzamukele?
I-pluses esemqoka yezocansi ezinhle
Inyoka yokuphuza ubhiya kusuka kumazambane
I-Vitamin isiphuzo "I-Blueberry ejabulisayo"
Imiphumela yokwelapha neyisimiso se-sauna ye-infrared
Izinwele zokubheka izinwele ezinde ngama-oblique bangs
Indlela yokukhetha izimonyo zesikhumba samafutha: amathiphu amathathu avela ochwepheshe
Amakhukhi ane-marshmallow yokugcwalisa kanye ne-chocolate icing
Indlela yokususa i-tattoo